ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း
martedì၊ Ottobre ၅၊ ၂၀၂၁
ဆားအရသာ ... နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကြာပြီး
Ivano Fossati ၏နှစ် ၇၀ သည်စိတ်မချရသော "ရှာဖွေသူ"
Gino Strada နှင့်သူ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလုံး ၀
Tuttiချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌စားဖိုမှူးမင်္ဂလာပါပုံစံMusa အားဖြင့်ငုပ်ဖြစ်ရပ်များပုံအမနာပစကားလူနေမှုပုံစံစတဲ့မိတ်ကပ်Man ManဂီတPsyche & seductionအနီရောင်ကော်ဇောအနီရောင်ပူဆန်းစစ်ခြင်းစျေးဝယ်လူမှုသတင်းအားကစား
Rosie Huntington-Whiteley ကသူမ၏ဗိုက်ကိုလူမှုမီဒီယာတွင်ပြသည်
Dakota Fanning သည်မိတ်ကပ်မပါဘဲ selfie
Ryan Reynolds သည်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုတစ်နှစ်ကြာရပ်နားခဲ့သည်
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်အသုံးအဆောင်များကို ၃၀% ပိုမိုအသုံးပြုသည်
လျှပ်စစ်ကား (နှင့်အားသွင်းစက်များ) သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။
သင်အဆိုအရကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်အရာ ၅ ခု ...
Lady Gaga နှင့်အတူအလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဇာတ်ကား၏ပထမဆုံး Trailer ဖြစ်သော House of Gucci ...
နွေရာသီ 2021: ဗီရိုထဲမှာလုံးဝရှိသည်4ပစ္စည်းများ
ဖိနပ်: ၂၀၂၁ နွေ ဦး ရာသီ / နွေရာသီ၏လမ်းကြောင်း
အော်စကာ ၂၀၂၁: စွဲမက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင် ၃ ခု
ဆက်စပ်ပစ္စည်း bondage, စေးနှင့်ကြိုးအားလုံးလွတ်မြောက်စေသည်
Nations League၊ အီတလီသည်ရှုံးပွဲမရှိ၊ တတိယနေရာ
JAQUELINE JEALOUS GUY'S VIDEO ONLINE "
The Dior Fairy Tale: ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စုဆောင်းခြင်း | ဗွီဒီယို
Tarte အလှကုန် Shape Tape Hydrating Foundation ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | ဗွီဒီယို
Kiko ရဲ့မမျှော်လင့်တဲ့ပရဒိသုကိုစမ်းကြည့်ရအောင် ဗွီဒီယို
ပင်မစာမျက်နှာ Tags: မိတ်ကပ်ပညာရှင်
Loris ချစ်သူများနေ့ - မေလ ၁ ရက်၊ 1
မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းသည်အနုပညာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများအတွက်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Loris ချစ်သူများနေ့ - 5ပြီလ 2018, XNUMX 1
နည်းပညာနှင့် ၀ က်ဘ် (Social Media, Youtube, FAD) တို့၏အဆကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အတွေးအခေါ်နှင့်ဘဝကိုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဟောင်းကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့သည်။
Stefania Bathory - မတ်လ 26, 2018 0
၎င်းသည်အထူးပွဲများအတွက်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများလားသို့မဟုတ်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အိမ်မှထွက်ခွာခြင်းကဲ့သို့နေ့စဉ်လိုအပ်သည့်အလေ့အထဖြစ်ဖြစ်၊
MUSA TALENT - ငါတို့ရဲ့အလှတရားကိုရှာကြစို့
ကလောဒီယာ Pellicciaro - နိုဝင်ဘာ 19, 2017 2
ငါ၏အကြိုက်ဆုံးလက်စွဲစာအုပ် | ကျွန်ုပ်၏ထိပ်ဆုံး ၅ - ...
ကလောဒီယာ Pellicciaro - နိုဝင်ဘာ 17, 2017 1
TOP5- ယခုအကြိုက်ဆုံးနှုတ်ခမ်းနီ (Coco Chanel Rouge € 34,90 ငါ Pupa lip 15,50 Wj lip tints € 6,90 Calvin klein € 22,50 NYC ...
လှည့်ကွက်ရှိသေးပေမယ့်သင်မမြင်ရနိုင်ပါ ... သို့မဟုတ်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နိုင်သည်?
ကလောဒီယာ Pellicciaro - နိုဝင်ဘာ 14, 2017 0
သူတို့ကို Jelly Flower lipstick လို့ခေါ်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကငါတို့တွေပွင့်လင်း lipstick လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့ကိုသင်မသိသေးဘူးလား။ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိ၊ ချက်ချင်းပဲရှင်းပြပါမည်။
MUSA TALENT - အလှအပရှာဖွေခြင်း
ကလောဒီယာ Pellicciaro - နိုဝင်ဘာ 8, 2017 2
မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်အားသင့်အားအီတလီရှိဂုဏ်အသရေအရှိဆုံးကျောင်းများအနက်မှတစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ MUSA TALENT အကယ်ဒမီသည်မီလန်တွင်အခြေစိုက်သည်
သူကသင့်ကိုတကယ်ချစ်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။5ညွှန်ပြကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာ
8ပြီလ 2020, XNUMX
ကလေးများ၏စံပြအလေးချိန် - အခြေခံပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးအလေးချိန်ကိုမည်သို့တွက်ချက်ရမည်နည်း။
မေလ ၁ ရက်၊
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသီချင်းများ - သူငယ်ချင်းများကိုအပ်နှံရန်အလှဆုံး ၁၀ ခု
စက်တင်ဘာ 18, 2020
သင် (ဖြစ်နိုင်သည်) မသိသောသုက်ပိုးနှင့်ပတ်သက်သည့်သိချင်စိတ် ၁၁ ခု
1 ယူရို2 ယူရို3 ယူရို4 ယူရို5 ယူရို6 ယူရို7 ယူရို8 ယူရို9 ယူရို10 ယူရို
ခရစ်စမတ် ၁၀ ယူနစ်အောက်မှာတွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ကလေးငယ် ၅ ယောက် ...
အိမ်တွင်းအပြာရောင် MASE: BYE BYE Impurities နှင့်အနက်ရောင်အမှတ်များ!
Amore anche လှပမှု bellezza Calcio capelli အိမ် cellulite ရုပ်ရှင်ရုံ လာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မိန်းမ အမြိုးသမီးမြား ecco ပုံ Giada D'Alleva ဟောလိဝုဒ် ဆောငျးရာသီ La နှုတ်ခမ်း Loris Old မိတ်ကပ် မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပညာရှင် မိုးတား ဂီတ occhi patrician saint တူးရွင်းပြား စိတ်ရောဂါ စိတ်ပညာ ရောဂါမပျံနှံ့အောင်ကာဆီးတားခြင်း ရိုစီတီ seductive ချစ်သူ sexy စျေးဝယ် အိပ် အားကစား နေ လမ်းကြောင်း လမ်းကြောင်းသစ် လူကို Vampires Vita
Lady Gaga သည်ရောမတွင်အဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်း။
ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2021
အကျိတ်နှင့် psyche: စိတ်ခံစားမှု "ဖော်ပြ" ၏အရေးပါမှုကို
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2020
Brooches - မင်းရဲ့အဝတ်အစားကိုအလှဆင်ဖို့ဖက်ရှင်ထိခြင်း
နိုဝင်ဘာ 24, 2020
Psyche & seduction1818
ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း791
musa.news သည်ဘလော့ဂ် - မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖက်ရှင်၊ မိတ်ကပ်၊ ဖက်ရှင်၊ သိချင်စိတ်၊ သဘာဝကုစားမှုများ၊ လူနေမှုပုံစံစတဲ့၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ စိတ်ပညာ၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ... အဘယ်ကြောင့်ဖက်ရှင်ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများအပေါ်နောက်တဖန်ရေးပါ? မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးပြီလား။ အတင်းအဖျင်း လိင်? သို့မဟုတ်ထိုထက်မက? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းဟာအမြင်အသစ်၊ ဦး တည်ချက်အသစ်၊ အရာရာတိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီးအရာရာတိုင်းဟာအရိပ်အသစ်တွေနဲ့အလင်းရောင်တွေထွန်းလင်းတောက်ပနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးစကြဝuniverseာဟာအဆုံးမဲ့ပြီးအမြဲတမ်းအရောင်အသစ်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ palette ပါ။ ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ၊ လှပသောဉာဏ်ရည်နှင့် ... အလှအပသည်ကမ္ဘာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
© Studiocolordesign အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင် Musa News VAT 01847900691 | studiocolordesign.com ကဒီဇိုင်း